Wasiir Beyle: "Go'aanka taariikhiga ah wuxuu Somalia u furayaa albabaab cusub oo horumar ah..." - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa soo dhoweeyay warka kasoo yeeray Hay’adda Lacagta adduunka ee IMF iyo Bankiga Horumarinta Afrika ee ku saabsan deyn ka cafinta Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sheegay in Guddiga sare ee maamulka Bangiga Horumarinta Afrika ayaa goaamiyeen habkii ay ku cafin lahaayeen deyntii ay ku lahaayeen Soomaaliya, wuxuuna ku tilmaamay go’aan taariikhi ah oo Soomaaliya u furayaa albaab cusub oo horumar ah, taasoo ay ka mid tahay in Soomaaliya loola macaamilo sida dalalka kale ee Qaaradda Afrika.
“Hadaan nahay Soomaaliya Dadaalkeenii wuu muuqdaa, waana ku farxi karnaa..” ayuu yiri wasiir Beyle oo dhinaca kale xusay in Agaasimaha Guud ee IMF Kristalina_Georgieva ay sheegtay in INF ay heshay lacag ku filan oo lagu bixin karo deynta Soomaalia lagu leeyahay, iyadoo 100 dal kabadan ayaa balan qaadeeny in ay diyaar u yihiin ka qeyb galka bixinta Deymaha Soomaaliya lagu leeyahay.
“Dadaalkani waa taariikhi, laakin intaan ka badan oo horumar ah ayaa inoo haray, kamana caajisidoono inaan ka miro dhalino hadafkeena ah Guusha Soomaaliya..” ayuu yiri Wasiirka Maaiyadda xukuumadda Soomaaliya.
Previous articleCiidamada Dowladda ee Dh/Mareeb oo xiray mas’uul ka tirsan Ahlu suna & xayiraad cusub oo lagu rogay..
Next articleAlshabab oo iclaamisay Dagaal toos ah oo Dowladda Kenya looga xoreynayo Gobolka W/Bari ee Soomaalida